Ololaha nadaafadda Jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay xarunta Shabeelle – Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Ololaha nadaafadda Jaamacadda ayaa maanta…
Ardayda, macalimiinta Kuliyadda Waxbarashada iyo Maamulka JUS , ayaa maanta olole nadaafadeed ka sameeyay xarunta Shabeelle ee defmada Xamarwayne. Raktarka JUS Dr. Maxamed Axmed Jimcaale, ayaa kala qaybqaatay ardayda ololaha nadaafadda, wuxuuna sheegay in ay doonayaan in shaqadaan ay noqoto mid joogto ah, isla markaana bil kasta maalin nadaafad wadareed ah ay ardaydu samayso.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Degmada Xamarweyne, Cabdiraxmaan Cumar ayaa kaalin mug leh ka qaatay howsha nadaafadda. Sidoo kale waxa ardayda kala qaybqaatay ololahaan Gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmo Caamir Shakeeti, iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu Jaamacadda ku caawiyay qalabka lagu samaynayay nadaafadda. Ololahaan waxaa soo qabanqaabiyay kuliyadda Waxbarashada.
Categories: News, SliderBy snuedu March 5, 2020 Leave a comment
PreviousPrevious post:Maareeyaha Guud ee Wakaaladda Dhismaha Soomaaliyeed Oo Kormeeray Xarunta Gaheyr ee Jaamacadda UmmaddaNextNext post:JUS ayaa ku guuleysatay iney dayactirto labo dhismo oo ku yaal xarunta Gaheyr